Ahoana no mihaona ny manan-karena ny olona tao Korea Atsimo sy amin'ny hoavy faritra
Fantatra amin’ny fomba ofisialy amin’ny Repoblikan’i Korea, ny Repoblikan’i Korea dia iray amin’ireo firenena manan-karena indrindra ao Avaratra. Ankoatra izany, Korea Atsimo laharana fahafolo eo amin’izao tontolo izao eo amin’ny lafiny fahefa-mividy parity. Ny firenena ny olom-pirenena tia ny iray amin’ireo fenitra ambony indrindra amin’ny fiainana ao amin’ny kaontinanta. Noho izany, raha tsy an-tsaina ny daty avy any ivelany, any Korea Atsimo dia ny toerana mba hijery manan-karena ny olona iray, ary izany dia hanome anao amin’ny zavatra mihoatra noho ny ara-tsosialy sy aina ny fiainana. TORO-hevitra: Ny milionera antoko any Korea Atsimo no manana be dia be ny manan-karena ny olona iray izay mitady ny vehivavy ny daty sy ny hanambady. Mitondra fiara amin’ny fifadian-kanina lane no iray amin’ireo tena milina ny koreana Tatsimo toe-karena, indrindra fa tao anatin’ny roa-polo taona taonjato faharoa-polo, ao amin’ny firenena ny fiara orinasa. Be ny fitomboana ny koreana Tatsimo fiara orinasa dia efa entin’ny fanondranana ny firenena Tandrefana noho ny fanondranana, ary na dia eo aza ny zava-misy fa ny fanondranana efa nihena tao anatin’ny taona vitsivitsy, ny koreana Tatsimo fiara orinasa mbola ho iray amin’ireo lehibe indrindra ny fiara orinasa eo amin’izao tontolo izao. Amin’izao fotoana izao dia eo amin’ny laharana fahadimy eto amin’izao tontolo izao eo amin’ny lafiny famokarana sy ny fahenina tamin’ny resaka fanondranana. Mandra-dia, ny tany am-boalohany ny asa ihany ny fiangonana, dia ny faritra nafarana avy any Japana sy Etazonia, ary amin’izao fotoana izao ny koreana Tatsimo fiara orinasa dia iray amin’ireo indrindra ny fandrosoan’ny teknolojia ao amin’ny tontolo. Maro predefined modely, mampiseho tsy ny fahaiza-manao amin’ny resaka famolavolana sy ny fampisehoana, fa koa ny marka ny fiandohan ny taona ny teknolojia. Anisan’ny manan-danja indrindra ny anarana ao amin’ny fiara orinasa any Korea Atsimo dia Hyundai, Azia Motors, KIA Maotera Vondrona, Raha, SsangYong sy ny Renault Del marika.
Afaka miainga avy amin’ny injeniera, mpamorona sy ny hafa matihanina ny mpiasa tena mahay ho an’ny Tale Mpanatanteraka sy ny raharaham-barotra ireo mpikambana ambony fiara orinasa, ny maro izay mety ho manan-karena, tokana olona mitady fahafahana mba mihaona amin’ny olona. Ny toerana tsara mba hihaona ho fihaonambe, fivoriambe, sy ny fampahafantarana dosages mifandray ny fiara orinasa. Eto dia afaka mahazo mifampikasokasoka amin’ny vahiny sy mpikarakara, ary raha tsara vintana ianao, dia ho hitanao ny manan-karena sy ny fahombiazana olona mba hiatrehana ny fiainana ara-tsosialy ho maharitra miaraka amin’ny fanampian’ny ny lalana haingana.
Hihaona ny ultra-manan-karena ny olona tao amin’ny Milionera ny Lalao
Ny ara-bola ny olona iray-ny tena mandroso ny toe-karena tao Asia, ary koa manerana izao tontolo izao, ary ny Repoblikan’i Korea ihany koa ny rafitra ara-bola eo amin’ny lalitra. Ny tanàna lehibe indrindra, tahaka ny renivohitra, Seoul, Busan sy Incheon, manana be dia be ny tambajotra ny fikambanana ara-bola. Noho izany, banky, mpanoro-hevitra, ny fampiasam-bola amin’ny mpitantana, ny fefy ny vola, ny fiantohana ara-bola sy mpitantana iray ny karama ambony indrindra professional saha tao korea Atsimo ny toe-karena. Raha te hihaona amin’ny fomba, nisy safidy lehibe dia ny hitady ny tompokovavy avy amin’ny karama ambony indrindra amin’ny fampiharana, misotro kafe na mijery ny famerenana amin’ny fampiasam-bola amin’ny iray amin’ireo distrika ara-bola ny tanàna.
Mazava ho azy, dia hahita olona matihanina, avy mahomby na manan-karena ny olona iray
Any amin’ny tany Atsimo, toy izany ny faritra Teheran eny an-dalambe sy ny tena»Biby handeha»ny distrika. Munich dia ny iray amin’ireo fototra ara-bola foibe tany Busan, sy ny manaraka Iraisam-pirenena ara-bola foibe, efa vonona hihaona amin’ny firaisana ara-mamorona, teknolojia sy ny raharaham-barotra. Tsy manam-paharoa eo an-toerana, matetika any Korea, no iray amin’ireo sehatra ny fialam-boly no tena maro loko ao Azia, ary, raha ny marina, fialam-boly sy ny vahiny manolotra ny tanàna lehibe, toy ny Seoul, any Korea Atsimo; Busan, ary Incheon, izay azo ampitahaina amin’ny maro ny tena manokana eo amin’izao tontolo izao. Ao amin’ity faritra ity, Chongsam Dong dia fantatra amin’ny maha-trano kokoa raitra bar, trano fisakafoanana sy fandraisam-bahiny. Ny iray amin’ireo toerana ireo no Lund, izay manana ny maro mahasarika tantara ho an’ny vahiny izay mitady ankehitriny fa tsy ny hariva misotro hafakely molotov na hankafy fotsiny ny sakafo matsiro. Bebe kokoa nametraka tao amin’ny faritra S-bar, izay tena manintona ny mpanjifa amin’ny ny safidy ny mozika sy ny zava-pisotro malefaka. Na izany aza, raha toa ianao ka mitady ny kanto sy ultramodern mijery, ny efitrano fandraisam-bahiny afaka ny ho toerana ho anao. Miorina ao amin’ny W trano fandraisam-bahiny, amin’ity efitra ity dia multi-sehatra, tsy manam-paharoa, ary kanto ny trano rantsan-kazo ho an’ny fiainana manokana, ny fahaiza-maoderina miendrika atody seza, ny valin-drihana. Mihoatra ny iray amin’ireo adiresy ao Seoul izay ny tsara indrindra sy manan-karena mba masìna ianao, dia mena.
Izany damaody bar-ny fiaramanidina fotsiny kiakiaka glamour sy decadence
Hita ao anatiny ny rendrarendra Grand Inter-Continental Seoul trano fandraisam-bahiny, Valahara dia ahitana ny roa samy hafa barany dimy sy ny tsy miankina ny efi-trano rehetra amin’ny antoka fa ho afaka mifandray amin’ny ny sasany ny mpanankarena ny lehilahy tao an-tanàna. Amin’ny Mpisoloky, dia afaka manomboka ny fikarohana ny tena fialam-boly distrika ho an’ny olon-kafa manana safidy maro ho an’ny fiantsenana sy fisakafoana. Na izany aza, raha mitady toerana tsara ny mozika dia nilalao, sy ny fomba ny toerana, ary koa avy any ivelany tonga miaraka, mba manontany Maktoum Club. Ka rehefa ao Korea, ho vonona ho tia ny kolontsaina sy ny toe-karena no tena niroborobo, na dia rehefa handray soa feno ny fahafahana maro mba hahafantatra sy mihaona ny manan-karena, olona iray
Q, ahoana no ahafahako mahazo akaiky indrindra ny koreana? Fitiavana ny lehilahy koreana ao Korea →